ZOMA 18 OKTOBRA 2019
DEPIOTE TSARADIA MARCO SY IDEALISON : “Ny Iem irery no lalana hahafahana miroso”
Na dia lany “tamin’ny tsy miankina” aza dia tsy nanaraka ireo solombavambahoaka “tsy miankina” nilaza hanangana vondrona parlemantera manokana ny Depioten’Ampanihy Andrefana, Tsaradia Marco sy Idealison fa niditra tanteraka ao amin’ny vovonana Ird. 9 juillet 2019
Ireto farany izay nanao pao-droa mihitsy tao amin’ity Distrika ity. Araka ny fanazavana, isan’ireo nanolo-tena ho kandidan’ny Ird ny Depiote Tsaradia Marco, saingy noho ny fandaminana dia nanaiky nilefitra nirotsaka tamin’ny anaran’ny tenany manokana izy ary amin’izao fahalaniany izao dia niditra tanteraka ao anatin’ny vovonana Ird, loharano nipoirany ihany. “Nanapa-kevitra izahay fa izahay Depiote lany tao Ampanihy dia tsy ho depiote “tsy miankina” intsony fa IRD”, hoy ny fanambarany.
Solombavambahoaka zandriny indrindra hanokatra ny fivoriana manokana eny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza i Tsaradia Marco, 31 taona ny lehilahy, efa nanohana ny Filoha Andry Rajoelina hatramin’ny ela ary filohan’ny vovonana mpanohana an’i ANR (Andry Rajoelina) tany Luxemburg sy Belgique nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena. Toerana nandratoany fianarana rahateo ireto firenena roa voalaza farany ary tany no nahazoany ny mari-pahaizana ambony ny “Expertise, comptable et audit”. Efa niasa tamin’ny “Cabinet d’audit international” ihany koa izy ary nanapa-kevitra hitondra ny tenin’ny vahoakan’Ampanihy ka nirotsaka ho solombavambahoaka.
Ankoatra ny maha mpikatroka tao amin’ny antoko Tgv azy teo aloha dia isan’ireo resy lahatra tanteraka amin’ny vina Iem ihany koa izy ary nambarany fa “zavatra tsy mbola nisy mihitsy teto Madagasikara ny Iem.
Ny Filoha mitarika antsika dia Filoha tanora indrindra nefa manana vina aty Afrika. Iaraha-mahalala ny finiavany. Ireny velirano 13 nampanantenainy ireny dia ankapobeny fotsiny ihany fa ny pitsopitsony mandrafitra azy tena mafonja dia mafonja, azo ampifanarahana amin’ny zava-misy sy amin’ny vanim-potoana rehetra”. Mbola nohamafisiny koa fa “Ny Iem irery no lalana hahafahana miroso mankany amin’ny fisandratan’ny firenena.”
Handrangotra voasary "Pamplemousse Fc" avy atsy Maorisy ny Fosan’i Boeny KITRA (436) 18 octobre 2019 Hanakorontana ireo andian’olona voakarama TETIKASA TANAMASOANDRO (166) 17 octobre 2019 Polisy miisa roa tratra nanao kolikoly SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO (98) 17 octobre 2019 Roa maty voatifitra, telo azo sambo-belona AMBALAKINDRESY - DAHALO NANAFIKA (91) 15 octobre 2019 Mpandeha miisa 3 naratra mafy vokatry ny tandrevaky ny mpamily LOZAM-PIFAMOIVOIZANA RN 12 (91) 17 octobre 2019 Orinasa tratra nampiasa zaza tsy ampy taona no tsy manaja ny zon’ny mpiasa ORINASA IRAY ENY AMPANGABE (86) 15 octobre 2019